Cycgba ígwè nwere ike belata abụba afọ? - Cygba Ígwè
Isi > Cygba Ígwè > Kedu ihe ịgba ịnyịnya ígwè na-eme n'ahụ gị - mkpebi ndị dị irè
Kedu ihe ịgba ịnyịnya ígwè na-eme n'ahụ gị - mkpebi ndị dị irè
Cycgba ígwè nwere ike belata abụba afọ?
cbd mmanụ na afọ efu
Ọ bụrụ n’itinye ihe abụọ ma ọ bụ atọ n’ime ndị a ka ị na - emega ahụ kwa izu, ị nọ n’ezi ụzọ. ♪ - Mmiri ọ Dụrinụ bụ n'ezie ihe dị mma maka gị, na ọ bụghị naanị nke ahụ, ọ nwere ike bụrụ ntakịrị agụụ na-egbochi agụụ. Ugbu a i aụworo mmanya nke ọma, agụụ agaghị agụ gị ugbu a.
Ọfọn, anyị kwuru banyere isiokwu mgbatị ahụ nke ime ụlọ anyị na mbụ. Yabụ ọ bụrụ na ị pịa ebe ahụ, a ga-akpọrọ gị gaa ebe anyị nọ ebe anyị nwere mgbatị siri ike dị ukwuu. Ma ọ bụ nanị ala n'ebe ahụ, mụ na Matt mere otu isiokwu banyere igwe igwe igwe igwe ma ọ na-emetụta arụmọrụ ịrịgo gị.
Nwere ike ịgba ịnyịnya ígwè na-ada ụda n'ahụ gị?
Ee,ịgba ígwè nwere ikeEnyemakaida abụba abụba, ma ọgawere oge. Nnyocha e mere n'oge na-adịbeghị anya gosipụtara mgbe nileịgba ígwènwere ike ịkwalite n'ozuzuabụbaọnwụ na-akwalite ahụ ike. Ijibelatan'ozuzuafọgirth, agafeghị oke-eme aerobic omume, dị kaịgba ígwè(ma ọ bụ n'ime ụlọ ma ọ bụ n'èzí), dị irè iji belataafọ abụba.Bọchị 2 2021
Perineum bụkwa ebe nnukwu arịa ọbara na akwara gị dị, nke na-enye mmetụta nke mpaghara ahụ ma yabụ na-enye aka na ụlọ ahụ. N’elu perineum bụ prostate gị, gland nke na - ewepụta mmiri seminal na - agafe eriri afọ. N'iburu anatomi anyị na ọdịdị nke ihe ahụ, ọ dị ka ọ bụ ihe ezi uche dị na ya ịme njikọ n'etiti ịgba ịnyịnya na ihe mgbu ma ọ bụ nhụjuanya, nrụrụ erectile na nsogbu prostate, mana ka anyị leruo ya anya.
igwe eji agba mmiri ozuzo
Ọ dị m ka anyị matara onwe anyị nke ọma ịgwa m banyere ya. Ọ bụ mgbe m nọ n'ọdụ ụgbọ elu ikuku na Indianapolis na anyị na-eme nyocha oghere ikuku, n'ọnọdụ nke ị ga-anọdụ ala nwayọ na igwe kwụ otu ebe ruo nkeji iri atọ ebe igwe kwụ otu ebe na-ekpochapụ ikuku ikuku. Ihe ọ pụtara Ọ ga-abụrịrị na ị naghị emegharị ahụ gị elu, n'ihi na ụdị nchagharị ọ bụla ga-agbagọ nsonaazụ ahụ.
Yabụ ọ bụrụ na ị nwere ọrịa shuga, ọbara mgbali elu, ma ọ bụ anwụrụ ọkụ, ikekwe ị nwere nrụrụ erectile, mana ị nwekwara ike ịrịa ọrịa obi. Nke bụ eziokwu bụ na ọtụtụ ndị toro eto ga-amalite ịgba ịnyịnya ígwè. Ọ bụrụ na ị bụ onye na-agba ịnyịnya ígwè ugbu a ma bụrụ afọ ole na-eto eto na-adịghị arụ ọrụ erectile, ihe mbụ ị chere ekwesịghị ịbụ, 'Oh, nke a bụ sadulu m' naanị n'ihi ịgba ígwè. 'Okwesiri ibu, Agagh m eli isi m na ájá Nke a nwere ike ịbụ ihe na-egosi ihe na-achọpụtabeghị.
Achọrọ m ka m chọpụta nke a ụdị mmebi ahụ gị na akwara nke ga - eduga na nrụrụ erectile. Yabụ kedu ihe siri ike ime nke ahụ? Thatdị ahụ dị egwu na-emetụta perineum gị agaghị enye gị nrụrụ erectile. Gaa ma lelee ya.
Nke mbụ, iji nweta MOT kwesịrị ekwesị site n'echiche nke obi, gịnị kpatara na ị gaghị enwe nsogbu ịgwọ ọrịa. Echere m, okirikiri ezuola. O meela ka ị bụrụ ntakịrị ihe na-adịghị mma na ezigbo nsogbu ahụike ị nwere ike ịhazi ya. Na mgbe ahụ ị ga-ahụ ha.
Otu n'ime ihe ndị anyị ji enye ihe ngosi nke ihe egwu nke ọrịa prostate bụ ịnwale ule ọbara ma enwere echiche na ọ bụrụ na ị na-agbagharị ọtụtụ ị nwere ike iwe iwe prostate gị na nke a nwere ike ịbụ nyocha ọbara gị nke a na-akpọ PSA nke a na-akpọ na-arụ ọrụ. ebuli ọbara ule a prostate kpọmkwem antigen ọbara ule na-erute n'ókè ị mere nke ahụ ọbara ule ọ na-artificially elu na mgbe ahụ ị nwere a dum ụyọkọ nke ule na ị dịghị mkpa n'ihi na ị na-biking na nke ahụ abụghị eziokwu, ọ bụghị ya - enwere ohere ọ nwere ike metụta ntakịrị, mana ọ bụrụ na ị lelee nyocha nyocha nke ụlọ nyocha na ọtụtụ, ọtụtụ akara nrịba akwara maka ọrịa cancer prostate, ịgba ígwè na mmega ahụ enweghị ihe dị iche na nke ọ bụla na-egosi ọrịa kansa prostate, yabụ ịgba ịnyịnya ígwè dị mma You nweta Ọ dị mma, ọ na-eme ka ahụike gị na-arịa ọrịa obi ihe niile na-ebelata ihe ize ndụ gị nke kansa yana ọ dịghị emetụ ule na-adịghị mma maka ọrịa cancer na mgbe ahụ ọ na-aga n'ihu. N'ụzọ dị mma, enweghi nnukwu ihe ize ndụ nke ọrịa cancer prostate. Ihe anyị kwesịrị ime dị ka ụmụ okorobịa na-eche banyere ya.
Ya mere, na nke m na omume m, enwere m foto gbagọrọ agbagọ. Ya mere, anyị nwere nnukwu ọrụ dị otú a na ị ga-enwe ndị ọrịa site na 30 ruo 80 na 90s na-eche banyere ya, ma ọ bụrụ na ị nwere mgbaàmà ọ bụla na-echegbu onwe gị, atụla ụjọ, tinye isi na ájá ma duzie nwee mkparịta ụka kwesịrị ekwesị na nyocha nke ihe bụ nsogbu bụ, ọ bụrụ na enwere ọkọlọtọ ọ bụla na-acha uhie uhie ime ihe ma ọ bụrụ na ịchọrọ ha Ya mere, ọ nweghị njikọ dị n'etiti ịgba ịnyịnya na ọrịa cancer prostate, mana ọrịa prostate bụ nnukwu ihe maka nnukwu akụkụ nke ndị ọgba tum tum Nsogbu naanị n'ihi na ha bụ ụmụ nwoke, ha emeela agadi, ya mere, ha kwesịrị ichebara ya echiche. Amaghị m banyere gị mana ụzọ m ga-esi wepụ mkparịta ụka a ya na Anthony bụ na anyị nwere ike ghara iwere ahụike anyị ka ihe efu, anyị kwesịrị ịnwụ ọnwụ nke anyị ma chọọ n'ezie enyere aka mgbe anyị chọrọ ya n'ihi na anyị enweghị mkpa gs bụ ma eleghị anya nsogbu kachasị anyị ga - eche ihu ugbu a enwere ike ị gafere obere ozi mgbe ị na - agwa gị gbasara mpempe akwụkwọ m na ifufe ma enwere m ike n'echiche ahụ anyị niile kwesịrị ịnwa e otu Mkparịta ụka - Ma eleghị anya, ndị enyi anyị na klọb na-agba ya na ngwụsị izu a, ma ọ dịkarịa ala nwee nkata banyere isiokwu a echere m na nke ahụ ga-abụ ebe dị mma ịmalite. Ugbu a kwa, biko jide n'aka na ọ na-enye m nnukwu mkpịsị aka iji kelee Anthony maka oge ya na ahụmịhe nkekọrịta anyị na anyị, ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịhụ isiokwu ọzọ n'otu isiokwu ahụ.
Cycgba ígwè ọ na-eme ka apata ụkwụ gị buru ibu?
Cygba ígwèmma n'ozuzu ọrụ nanke gialaahụma na-ewusinke giakwara ụkwụ n’etinyeghị ha nsogbu. Ọ zaanke giquads, glutes, hamstrings, na umu-ehi.Jenụwarị 21 2020bọchị 2020
Cycgba ígwè bụ ụzọ dị mma iji felata?
Azịza dị mkpirikpi maka ma ọ bụịgba ígwèna-agamee ụkwụ gịburu ibu - mba. N'ezie,ịgba ígwèka mmaụkwụ gịmọzụlụ, mana dị ka mmega ahụ nke ikuku, ọ na-arụ ọrụnke gintachi obi akwara,na-emeha na-eguzogide ike ọgwụgwụ mgbe ha na-azụ ọzụzụ, mana ọ naghị eme ka ha bulie elu.June 21. 2018 Nov.
Linggba ígwè ọ na-ada ụda afọ gị?
Na-agba ịnyịnya ígwègbaa abụba? Eeh. Ọ bụ ezieafọ gịakwara anaghị arụ ọrụ dị kanke giquads ma ọ bụ mmuta mgbeị na-na-agba ịnyịnya, maịnyịnya ígwè siaerobic ọdịdị pụtara na ị na-ere ọkụ abụba.bọchị 2020
Kedu ka ịgba ịnyịnya si eme ka apata ụkwụ gị buru ibu?
Otú ọ dị, na okwu sara mbara, Iaciofono na-atụ arondị na-agba ịnyịnya ígwègụnyere 'otu ikpere abụọ na ikpere ụkwụ hip - squats, deadlifts, Romanian deadlifts, hip thrusts. Omume ndị ọzọ - dị ka usoro otu, otuụkwụhip thrusts, otuụkwụNdị Romania nwụrụ.Eprel 28 2020
Enwere m ike tufuo abụba apata ụkwụ site n'ịgba ịnyịnya?
Ndị ọkachamara na-ekwu naịgba ígwèma ọ bụ ịkụ ụkwụ na-eme ka ọtụtụ akwara ụkwụ rụọ ọrụ. Ihe bụ ihe ọzọ,ịnya igwe nwere ike ọkụgburugburu calories 400 kwa awa - yabụ gịnwere ike idaibu ibu nabelata abụba apata ụkwụ.Mkpebi 22 2018
Gịnị mere ịgba ịnyịnya ji dị mma maka ahụ gị dị ala?
Ike ụkwụ ịgba ịnyịnya ígwè na-eme ka ọrụ zuru ezu dị n’ahụ gị dị ike ma na-ewusi mọzụlụ ụkwụ gị ike n’etinyeghị ha nsogbu. Ọ na-agbado gị quads, glutes, hamstrings, na ụmụ ehi.
Kedu ihe na-eme ahụ gị mgbe ị na-agba ịnyịnya ígwè?
Gba ịnyịnya ígwè na-abụkarị ọrụ ikuku, nke pụtara na obi gị, arịa ọbara na ngụgụ na-enweta mgbatị ahụ. Will ga-eku ume miri emi, ọsụsọ na ahụmịhe nke ahụ, nke ga-eme ka ogo gị dịkwuo mma.
Kedu akụkụ nke ahụ mmadụ na-arụ ọrụ igwe?
Gba ígwè abụghị naanị ọrụ a ma ama, nke na-atọ ụtọ, ọ bụkwa mmega ahụ zuru oke, na-etinye ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ akụkụ ahụ ike niile dị gị n'ahụ. Ọ bụ ezie na ọ dabere na mọzụlụ dị gị n’okpuru, ahụ gị dị elu na-enwetakwa mgbatị ahụ.